Swoop hadda waxay kaloo la micno tahay Destination Winnipeg markale
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Swoop hadda waxay kaloo la micno tahay Destination Winnipeg markale
Airlines • Airport • Wararka Kanada • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
swoop swoop wuxuu ku soo laabtay winnipeg
Shirkada duulimaadka Kanada ee qiimaha jaban ee Swoop ayaa dib u bilaabaya adeegii Winnipeg.
Maanta, Swoop waxay calaamadeysay dib ugu soo noqoshadeeda garoonka diyaaradaha ee Winnipeg James Armstrong Richardson (YWG).
Dib-u-soo-celinta shirkadda duulimaadyadeeda tikidhada aadka u hooseeya waxay hadda isku xireysaa Winnipeg iyo Hamilton's John C. Munro International Airport (YHM) iyo Abbotsford International Airport (YXX), iyadoo howgallada garoonka diyaaradaha ee Kelowna International Airport (YLW) ay bilaabmi doonaan bisha Juun.
Ku dhawaaqista maanta waxay u tahay taariikh muhiim ah Swoop maaddaama shirkaddu ay sii waddo dadaalkeeda soo kabashada iyadoo lala kaashanayo la-hawlgalayaasha sida Winnipeg's James Armstrong Richardson International Airport si ay u keento safar duulimaad oo la awoodi karo oo ay ku gaari karto dhammaan dadka reer Kanada. Duulimaadku wuxuu weli ku rajo weyn yahay in markii Kanada ay sii waddo soo saaristeeda tallaalka, dib u bilaabid ammaan ah oo duulimaadyada gudaha ah ay ku soo fool leeyihiin.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan dib u xaqiijino ballanqaadkeena Manitoba iyadoo aan ku laabanayno Winnipeg," ayuu yiri Shane Workman, Madaxa Hawlgallada Duulista, Swoop. Qiimayaasheenna jaban ayaa hadda heli kara kuwa safraya sababo muhiim ah, Swoop-na waxay halkan u joogi doontaa inay taageerto soo kabashada dhaqaalaha gobolka oo ay ku xirto Manitobans qoyskooda iyo asxaabtooda marka waqtigu yimaado. ”
"Waan ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno Swoop magaalada Winnipeg iyadoo aan sii wadno qorshaynta soo celinta amaanka ah ee safarka gudaha iyadoo heerarka talaalka ay ku sii kordhayaan dalka oo dhan," ayuu yiri Barry Rempel, Madaxweynaha iyo Maamulaha Hay'ada Diyaaradaha ee Winnipeg. Soo noqoshada Swoop waa udub dhexaad muhiim u ah qorshaheena dib u dhiska isku xirnaanta gobolka waxayna siineysaa ikhtiyaar qiimo jaban safarka daruuriga ah maanta iyadoo gacan ka geysaneysa sidii loo wadi lahaa dib u soo kabashada dhaqaalaha Manitoba iyo bulshada markii la gaaro waqtiga safarka dheeriga ah. ”
Duulimaadyada ka yimaada Winnipeg iyo inaad waxbadan ka barato booqashada Swoop  FlySwoop.com  ama ku xirnow Swoop on  Facebook, Twitter, Instagram.
Ku saabsan Swoop: Waxaa la aasaasay 2018, Swoop waa shirkad diyaaradeed oo raqiis ah oo qiimo jaban, oo si madax-bannaan uga shaqeysa qayb ka mid ah WestJet Group ee shirkadaha, oo bixisa adeegyo jadwal u ah meelaha laga tago Kanada, Mareykanka, Mexico iyo Kariibiyaanka. Swoop waxay siisaa wax soo saar iyo adeegyo gebi ahaanba aan xirnayn, waxay u abuureysaa fursad qaas ah safarleyda inay ku xakameeyaan kharashaadkooda isla markaana u habeeyaan khibradooda iyagoo iibsanaya kaliya waxyaabaha dheeriga ah ee ay rabaan.
Swoop waxay ka shaqeysaa raxan casri ah oo ka kooban sagaal diyaaradood oo Boeing 737-800 ah, oo ku qalabaysan awood fadhiga iyo isku xirnaanta Wi-Fi. Flyswoop.com waxay u oggolaanaysaa dadka socotada ah inay si dhakhso leh oo fudud u jartaan duulimaadyada, u maareeyaan ballansashada, ka soo galaan, fiiriyaan kaararka lagu raaco, duulimaadyada raacaan iyo helitaanka adeegga Wi-Fi ee duulimaadka